कलिउड Archives - Page4of6- www.kchhakhabar.com
बिहेकै दिन मोडल बिमल अधिकारीको आत्महत्या ? हेर्नुस सत्य कुरा यस्तो छ (भिडियो सहित)
इटहरी- लोक गीतको दुनियामा अभिनय गरेर आफ्नो छुटै स्थान सुरक्षित गर्दै गएका मोडल बिमल अधिकारिले भर्खरै आत्महत्या गरेको भिडियो सार्बजनिक भएको छ । तर यो रियलमा नभई रिलमा मात्र भएको हो । प्रियशी म्युजिक प्रालि ले भर्खरै बजारमा सार्बजनिक गरेको म्युजिक भिडियोको एक सिनमा विमलले आत्महत्या गरेका छन् । ूस्वर्गलोकू बोलको गीतलाई चर्चित गायिका देबी घर्ति मगर ले गएकी छिन भने उनलाई गौतम निशानले गायनमा साथ् दिएक...
पत्नी मधुले खोलिदिइन् राजेश हमालबारे थाहा नपाइएका धेरै गोप्य कुराहरु
महानायक राजेश हमालका व्यक्तिगत आनीबानी कस्ता होलान ? धेरैलाई जिज्ञासा छ । उनी जस्ता छन् त्यो उनकी पत्नी मुधुलाई थाहा नहुने कुरा भएन । महानायक राजेश हमालका नौला नौला तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित मधुको अन्तर्वार्तामा यस्तो खुलासा भएको हो । पहिलो भेटमा ‘डान्स गरौँ’ भन्नुभयो १. पहिलोपल्ट कहाँ भेट भयो दुईजनाको ? हयात होटेलमा आयोजित लक्स ब्युटी स्टार कन्टेस्टमा म सहभा...
असार ४, २०७४- यसवर्ष उत्कृष्ट नवअभिनेता, नवअभिनेत्रीको अवार्ड क्रमश: ‘चपली हाइट २’बाट आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशी र सृष्टि श्रेष्ठले ‘गाजलु’बाट जिते । सृष्टि पनि अवार्ड समारोहमा अनुपस्थित रहिन् । बरु पछिल्लो समय प्रेम सम्बन्धमा रहेका आयुष्मान र प्रियंकाका लागि अवार्ड समारोह मिडियाको ध्यान तान्ने राम्रै खुराक बनिदियो । आमासँगै अवार्ड समारोहमा आएकी प्रियंकासँगै आयुष्मान पनि भाइ आशिरमान र आमा रवीनास...
अनमोल केसीसँग प्रेम गर्ने अदिती कति हट ? (हेर्नुस् तस्बीर)
चलचित्र “कृ”मा नायक अनमोल केसीसँग रोमान्स गर्ने भएपछि मोडल अदिती वुढाथोकी अहिले सर्वाधिक चर्चामा छिन् ।मोडलिङ दुनियाँमा चर्चित बनेकी अदितीका तस्बिरहरु गुगल र सामाजिक संजालमा सर्वाधिक खोजिएका पनि छन् । अदितीले पनि सामाजिक संजालमार्फत आफूले नयाँ करिअर सुरु गर्न लागेको लेखेकी छिन् । बोल्ड एन्ड ब्यूटी अदिती नेपाली चलचित्रमा लामो रेसको घोडा बन्न सक्ने अड्कलबाजी पनि सुरु नभएका होइनन् । चर्चित ब्यानरक...
ब्वायफ्रेण्डसंग रातभर कुरा गर्दा पिटाई खाएँ -प्रियंका कार्की
काठमाडौ । किशोरावस्थाको १८ वर्षसम्म टेनसन समस्या कति पनि हुन्न सबै कुरा हाम्रो परिवारले हेर्दीएको हुन्छ । त्यसैले यो पल जिन्दगीको रमाईलो पल हो । त्यो बेलामा खासै हाम्रो करियर सुरु भएको हुँदैन । सबै कुरा रमाईलोसँग बितेको हुन्छ । स्कुल सकेर कलेज जाने समयमा कुन विषय लिएर पढ्ने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । यो उमेरमा परिवारको कुरा भन्दा पनि आफ्नो कुरा राम्रो लाग्छ, आफ्नो कुरा सही लाग्छ । हामीले गरेको सबै क...
सेलिब्रिटी समाजकै परिमित अनुहार नै हुन् । तिनै अनुहारलाई लाखौंले पिछा गरेका हुन्छन् । त्यस्तै केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छोटो समयमै धेरै फ्यान कमाउने नायिका हुन् । उनी यतिबेला समाजप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी छिन् । रातोपाटीका सुदीप विश्वकर्मा र सरिता कार्कीसँग उनले भावुक हुँदै भनेकी छिन्, ‘७ वर्षकी बालिकालाई समेत अमानवीय व्यवहार हुन्छ, निर्वस्त्र कतै मर्न फालिएको हुन्छ,...
नम्रता श्रेष्ठलाई विवाहको प्रेसर
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ अहिले निकै चर्चामा छिन् । उनको चर्चाको प्रमुख कारण आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘पर्व’ हो । करिब एक वर्षको अन्तरालमा उनको यो चलचित्र आएको छ । ‘पर्व’ आफ्नो अभिनय रहेको बेस्ट चलचित्र भएको उनी बताउँछिन् । यो चलचित्र निर्देशक दिनेश राउतले बनाएका हुन् । उनी पछिल्लो समय दिनेशको चलचित्रमा मात्र देखिएकी छन् । कतिपयले यस विषयलाई लिएर नम्रता र दिनेशको सम्बन्धमा प्रश्न उ...
आखिर के गरे त राजेश हमालले चिसो व्यवहार जुन करिष्मालाई मन परेन
नायिका करिश्मा मानन्धर र नायक राजेश हमालको जोडीलाई नेपाली चलचित्रमा ‘सदाबहार’ जोडीको रुपमा लिइन्छ । यी दुइले अभिनय गरेका थुप्रै चलचित्र सफल छन् । चलचित्र ‘साथी’मा समावेश ‘आइ लभ यू’ बोलको गीत त अहिले पनि उस्तै चर्चामा छ । उनै, करिश्माले नायक हमालको बारेमा समय – समयमा टिप्पणी गर्दै आएकी छिन् । केही समय अगाडि उनले नायक राजेश हमाललाई काठमाण्डौको मेयर पदमा स्वतन्त्र रुपमा उठ्न चुनौती दिएकी थिइन् । ...
रुद्रप्रिया मार्फत सात बर्ष पछि एउटै पर्दामा आर्यन र रेखा, कस्तो बन्ला त फिल्म
सात वर्षपछि रेखा थापा र आर्यन सिग्देल सँगै पर्दामा देखिने भएका छन् । रेखा फिल्मसबाट बन्ने नयाँ फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ मा रेखाको अपोजिटमा आर्यन पक्का भएका हुन् । बुधबार रेखा फिल्मसको कार्यालय बालुबाटारमा आर्यन उपस्थित थिए । ‘यसलाई सबैले सुखद मिलनको रुपमा लिनु होला’ आर्यनसँग हात मिलाउँदै रेखाले भनिन् । करिब सात वर्ष अघि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘कसले चोर्यो मेरो मन’ पछि रेखा र आर्यनले फिल्ममा सँगै का...
गौरव पहारीकाे नयाँ चलचित्र रातो घर अाउँदै
मञ्जरी चलचित्रबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदाएका नायक हुन गौरव पहारी । उनले हाल सम्म थुप्रै सफल चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन । तर पनि उनले आज सम्म रिलीज चलचित्रबाट भने उनले सोचे जती सफलता पाउन सकेका छैन्न । तर पनि गौरबले आजसम्म जे जती चर्चा परिचर्चा र सफलता पाए त्यसबाट आफु खुशि रहको बताउँछन । गौरबको पछिल्लो समय रिलीजको तयारीमा रहेको चलचित्र हो रातो घर । रातो घरमा आफुले राम्रो काम गरेको र यसले प...